၂၀၁၈-ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာလအလိုက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း – Alinyaung
December 7, 2017 ErhekjqGPBzWQaQNQM ေဗဒင္ 0
စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ားလက္မွတ္ေေရးထိုးျခင္းဂ႐ုစိုက္ရမည္။ စီးပြားေရးတြင္ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္အဆင္ေျပသလို႐ွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳမည္။ယခုႏွစ္တြင္ဝါဆိုလ၊သီတင္းကြၽတ္လ၊ျပာသိုလမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိမည္၊ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းမဂၤလာႏွင့္
အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္မည္။ရည္စား႐ွိသူမ်ားကာလၾကာသည့္အခါမယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကံဳရကိန္း႐ွိသည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင္႔အဆင္မေျပမႈမ်ားခဏခဏျဖစ္မည္၊ ဉာဏဆိုင္ရာပညာရပ္းမ်ားတီတြင္ဆန္းသစ္ပညာရပ္မ်ားသင္ယူသင့္သည္။သို႔ေသာ္ပညာေရးတြင္ ခက္ခဲစြာသင္ယူရမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း ၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ကိုယ္ခႏၶာညာဘက္ျခမ္းေရာဂါဝင္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ သစၥာပန္း၊ကံေကာ္ၫြန္႔(၉)ၫြန္႔လွဴေပးပါ။ဖန္ခြက္ျဖင့္ေရေတာ္(၅)ခြက္လွဴေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ🌟ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ အေ႐ွ႕အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ ေမတၱာသုတ္(၃)ေခါက္ရြတ္ဆိုၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ အနီေရာင္၊အျဖဴေရာင္၊အစိမ္းေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား➖(ပ၊ဖ၊စ၊မ၊ည)၊(၃၊၀၊၇၊၂)
ယၾတာ➖ေရႊပန္း၊ေငြပန္း၊လသာပန္းတို႔ကိုမိမိေမြးေန႔တိုင္းဘုရားတြင္ပူေဇာ္ေပးပါ။ ဘုရားစင္တြင္ထီး၊တံခြန္၊ကုကၠားႏွင့္ယပ္ေတာင္လွဴေပပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ🌟ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ဂုဏ္ေတာ္(၉)ေခါက္ရြတ္ဆိုၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ၾကည္ျပာေရာင္၊ဆင္စြယ္ေရာင္၊ပန္းေရာင္အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား➖(လ၊ဝ၊သ၊ဒ)၊(၅၊၄၊၈၊၁)
ဤႏွစ္တြင္ ကာလအတန္ၾကာက်န္႔ၾကာေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖင့္ အစစအရာရာကံၾကမၼာပြင့္လင္းလာမည္။အေျပာင္းအလဲကိုလက္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ကိန္းၾကံဳမည္။ ေဆးဝါးေရာင္ဝယ္ျခင္း၊စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေရသန္႔လုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊အိမ္၊ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းမ်ားေကင္း၏။မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရာထူးတက္ျခင္း၊အႂကြးအကဲဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရတတ္သည္။အဆိပ္႐ွိေသာသတၱဝါမ်ားရန္မူျခင္းခံရတတ္သည္။ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရႊထည္၊ေငြလထည္ပစၥည္းမ်ားဝင္လာတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအတြက္ မၾကာခဏအမုန္းခံ၍ေျပာဆိုေပးရတတ္သည္။စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ေငြေၾကးကိစၥအာမခံျခင္း၊လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား သတိထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၌ အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ျခင္းမလုပ္သင့္ပါ။
ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား ခ်သ္သူအေပၚသံသယဝင္လာမည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားသားသမီးရတနာထြန္းကားၿပီး ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္မည္။ပညာေရးတြင္ဆရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး မိမိရည္မွန္းထားေသာပန္းတိုင္ကိုဆြတ္ခူးရမည္။အေပါင္းအသင္းအေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈကိုေ႐ွာင္သင့္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊အဆုတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ားခံစားရ၍မၾကာခဏက်န္းမာေရးညံ့မည္။ယခုႏွစ္တြင္ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ မေပါ့ဆသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္အုန္းၫြန္႔၊ရြက္လွၫြန္႔၊ၾကံၫြန္႔တို႔ကိုေပါင္းၿပီးေၾကးပန္းအိုးျဖင့္ ဘုရားတြင္ပူေဇာ္ေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ🌟ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအဆင္ေျပရန္အတြက္ သမၺဳေဒၶဂါထာ(၃)ေခါက္္ရြတ္ဆိုၿပီးခရီးသြားျခင္း၊အျပာေရာင္၊ၾကက္ေသြးေရာင္၊အျဖဴေရာင္အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား➖(စ၊ဆ၊တ၊ထ)၊(၆၊၄၊၂၊၇)
ဝါဆိုလေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဤႏွစ္တြင္ အခက္ခဲမည္မွ်႐ွိေစေဆာင္ရြက္စရာမ်ားေ႐ွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ႏိုင္းငံျခားမွဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပတတ္သည္။
အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊အေဆာက္အဦးမ်ားဝင္လာမည္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စီလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ဖုန္းအပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ယခုႏွစ္တြင္ဝါေခါင္လ၊သီတင္းကြၽတ္လ၊ျပာသိုလမ်ားတြင္မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိမည္။ယာဥ္ရထားစီးျခင္း ေမာင္းႏွင္းျခင္းမ်ားသတိထားရမည္။အေမြအႏွစ္ရျခင္း၊ရာထူးတတ္ျခင္းအထက္အႀကီးအကဲ၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရမည္။မိဘအႀကီးအကဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွက္ေပးရတတ္သည္။ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားတစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈအားနည္းတတ္သည္။စြပ္စြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားရကိန္းၾကံဳမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား သီခံျခင္းမ်ားျဖင့္သာယာေသာအိမ္ေထာင္မႈကိုဖန္တီးရမည့္ႏွသ္ျဖစ္သည္။
ပညာေရးတြင္စနစ္တက်သင္ယူသင့္သည္။ ဉာဏ္၊ဝရီယစိုက္ထုပ္ၿပီးလုပ္သင့္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ အစားအေသာက္မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ေရာဂါေဝဒနာဝင္တတ္သည္။ႏွလံုးေရာဂါခံစားရတတ္သည္။ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ဆီးမီးသက္ေစ့ကပ္ပူေဇာ္ေပးပါ။ဇြန္ပန္း၊သစၥာပန္းႏွင့္အျဖဴေရာင္ဂႏၶမာပန္းမ်ားပူေဇာ္ေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ🌟ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ (ဘဂဝါ) ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ (၉)ပတ္ပုတီးစိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ဖက္ဖူးေရာင္၊အညိဳေရာင္၊အဝါေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား➖(တ၊ထ၊က၊ခ)၊(၆၊၂၊၉၊၀)
ဤႏွစ္တြင္ ေ႐ွ႕ပိုင္း ၆လတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ေဆာင့ရြက္ရမည္။ စီပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္းမိမိအက်ိဳးကိစၥမ်ားပါေအာင္ျမင္မႈရမည္။ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္နည္းပညာပစၥည္းမ်ား တီထြင္မႈျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈရမည္။သတၱဳတြင္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားေကာင္းမည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ဂီတအႏုပညာ၊အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဖနိစီလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးခံစားရမည္။ယခုႏွစ္တြင္ ဝါဆိုလ၊သီတင္းကြၽတ္လ၊တပိုတြဲလမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိမည္။ အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားၿပီးဥပေဒႏွင့္ယွဥ္ဆိုင္ရတတ္သည္။အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္အဆင္ေျပမႈေႏွးေကြးမည္။လူငယ္လူရြယ္မ်ားခ်စ္သူအေပၚသံသယဝင္လာမည္။ ႏွစ္ထက္မိဘမ်ားသေဘာထားကြဲလြဲတတ္သည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္စကားမ်ားရမည္။
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္အဝါေရာင္ဂႏၼမာပန္း၊ေမၿမိဳ႕ပန္း၊သစၥပန္းတို႔ကိုေပါင့းထည့္ၿပီး အေ႐ွ႕အရပ္႐ွိဘုရားတြင္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ ဇရပ္၊ေက်ာင္းမ်ားတြင္တံျမက္စည္း လွဴေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ဗုေဒၶါဘဂဝါ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၅)ပတ္သိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊အဝါေရာင္၊အနီေရာင္၊ဆင္စြယ္ေရာင္အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ဤႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ စတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းအလုပ္ေနရာသစ္တိုးခ်ဲ့လုပ္ကိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရမည္။နာမည္ ဘုန္းကံတိုးတက္ၿပီးေနရာအႏွံ႔သြားကိန္း႐ွိသည္။လုပ္ငန္းခြင္တြင္မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရမည္။စိတ္ေလာႀကီးၿပီးတစ္ပါးသူ၏ ေငြေၾကးမ်ားကိုလုပ္ငန္းခြင္တြင္သံုးစဲြျခင္းမ်ား ေ႐ွာင္သင့္သည္။ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ယခုႏွစ္တြင္ ဝါဆိုလ။သီတင္းကြၽတ္လ၊ျပာသိုလမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြငသတိထား႐ွိရမည္။
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားတစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈအားနည္းတတ္သည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ရံဖန္ရံခါစကားျငင္းဆိုမႈမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ေပၚလာမည္။ပညာေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ခက္ခဲလာတတ္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း ၊ထံုနာက်င္နာေရာဂါ၊ေလႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားတတ္သည္။ကြၽမ္းက်င္ေသာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ျပသ၍ကုသလွ်င္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းတတ္သည္။
ယၾတာ➖မိမိ၏ေမြးေန႔တြင္ ေငြေရာင္ပန္းအိုးျဖင့္ ရြက္လွၫြန္႔၊စပယ္ၫြန္႔၊ပိေထာက္ၫြန္႔၊သက္ကယ္ၫြန္႔ တို႔ကိုေပါင္းၿပီးပူေဇာ္ေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(မႏုတၱေရာပုရိတ ဓမၼာသရတိ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ အျဖဴေရာင္ ၊လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (ပ၊ဗ၊တ၊ဓ).(၇.၆.၄.၀)
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ဆီမီးသက္ေစ့၊ပန္းသက္ေစ့၊သစ္သီးသက္ေစ့လွဴျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ပါ။သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အဖိုးအဘြား၊အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ငခ်ိပ္ေပါင္း၊ ဘယေၾကာ္၊ ထိုးမုန္႔၊လမုန္႔ႏွင့္အုန္းထမင္းလွဴေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၺေႏၷာ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊ ဆင္စြယ္ေရာင္၊အနီေရာင္၊အျပာေရာင္ အဝတ္ထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (ရ၊ယ၊လ၊ဝ).(၅.၉.၁.၃)
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ ပုတီးစိပ္၊အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ားအထူးျပဳလုပ္၍ဆြမ္းႏွင့္ဆြမ္းဆန္စိမ္း၊ေဆးဝါးထုပ္မ်ားလွဴျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(အရဟံ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၉)ပတ္စိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ဖက္ဖူးေရာင္၊ပန္းေရာင္၊ၾကည္ျပာေရာင္အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (က၊ခ၊ဂ၊စ).(၄.၉.၆.၈)
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ေၾကးပန္းအိုးျဖင့္ႏွင္းဆီ၊သေျပ၊မာလာကာၫြန္႔တို႔ကိုေပါင္းထည့္ၿပီး ဘုရားတြင္ပူေဇာ္ေပးပါ။ယပ္(၈)ေခ်ာင္း၊ေရႊထီး(၁၁)လက္လွဴေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(သုဂေတာ ေလာကဝိဒူ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ေပးပါ၊၊
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ေၾကးဖလားျဖင့္ေရေတာ္(၅)ခြက္ႏွင့္ယို(၅)မ်ိဳးလွဴေပးပါ။တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားတြင္သကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ႏွင္းဆီပန္း၊အုန္းၫြန္႔၊ကံေကာ္ၫြန္႔တိုကိုေပါင္ၿပီး ပန္းအိုးတစ္အိုးဘုရားတြင္ပူေဇာ္ေပးရမည္။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(သမၼာသမၺေဒၶါ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၇)ပတ္စိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ အျဖဴေရာင္ ၊ အဝါေရာင္၊ၾကက္ေသြးေရာင္အဝတ္ထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (က၊စ၊ည၊င).(၁.၉.၂.၄)။
ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္၊ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ ပိေတာက္ၫြန္႔၊ ဇီးၫြန္႔၊ရြက္လွၫြန္႔၊ကန္းဇြန္းၫြန္႔တို႔ကိုေပါင္းၿပီး ေႂကြပန္းအိုးျဖင့္ အေ႐ွ႕အရပ္ဘုရားတြင္ပူေဇာ္ေပးပါ။မိမိေမြးေန႔တြင္အဝါေရာင္ပန္းမ်ား၊မုန္႔ထုပ္၊ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္၊ေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားလွဴဒန္းေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ေလာကဝိဒူ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၇)ပတ္စိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊အနီေရာင္၊အျပာေရာင္၊ဆင္စြယ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (ယ၊ရ၊တ၊ဓ).(၂.၅.၉.၃.)။
ဤႏွစ္တြင္ျပည္တြင္းျပည္ပကိစၥေရးရာအျဖာျဖာေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အခါေကာင္းက်ေရာက္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္အထူးျခားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာမည္။ဖန္စီလုပ္ငန္း၊ဖက္႐ွင္လုပ္ငန္း၊ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏။ယခုႏွစ္တြင္ ဝါဆိုလ၊ သီတင္းကြၽတ္လ၊ျပာသိုလမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိမည္။အထူးသျဖင့္တစ္ပါးသူ၏ၾကားခံဝင္ေရာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္မိသားစုတြင္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ျခင္းမ်ား သတိထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ယာ၊တိုက္ခန္း၊ေျမယာျခံကြက္မ်ားရ႐ွိတတ္သည္။လူမ်ိဴးခဲြမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္မ်ားေကာင္းမည္။ ေမတၱာေရးတြင္အေသးစားျပႆနာမ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ပဋိပကၡျဖစ္ကာ လမ္းခြဲရျခင္းၾကံဳရမည္။အိမ္ေထာင္ေရးစိတ္သေဘာထားႀကီးႀကီးထားသင့္သည္။မိမိအိမ္တြင္းေရးမ်ားႏွင့္ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားအတြက္ေငြေၾကးႏွင့္လူမႈေရး အပူေသာကမ်ားဝင္လာတတ္သည္။နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ားအိမ္သို႔အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊မသြားလိုေသာခရီးမ်ားလဲသြားရတတ္သည္။
စက္မႈ၊လက္မႈပညာေခတ္ႏွင့္ ညီေသာပညာရပ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားျခင္းမ်ားအထူးေကာင္းမြန္သည္။က်န္းမာေရးတြင္၊အဖ်ားအနာ၊ႏွလံုး၊ဆီး၊ေက်ာက္ကပ္၊အဂၤါဇတ္အစ႐ွိေသာေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားရတတ္သည္။ယၾတာ➖မိမိေမြးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ေအာင္သေျပ၊ကံေကာ္ပန္းႏွင့္သစၥာပန္းမ်ားကိုအေ႐ွ႕အရပ္ဘုရားတြင္လွဴဒန္းေပးပါ။ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား🌟ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(သတၱေဒဝမႏုႆာနံ)ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီးခရီးသြားျခင္း၊ေၾကးနီေရာင္၊အဝါေရာင္၊အစိမ္းႏုေရာင္အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား (သ၊ဟ၊စ၊ည).(၁.၆.၈.၃.)။
ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအားလံုး စိတ္ခ်မ္းကိုယ္က်န္းမာၿပီး ႏွစ္မွာေအာင္ကံေကာက္းမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာေန႔ရက္မ်ားစြာကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ 🌷🌷🌷
🌟 ေအာက္ပါ ထိမိေသာ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္ /ယၾတာ အစီးအမံမ်ား အာမခံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္🌟အိမ္ျခံေျမ၊ကား၊ အစ႐ွိေသာပစၥည္းမ်ား မိမိႀကိဳက္ေစ်းျဖင့္ အျမန္အေရာင္းထြက္ရန္ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္အိမ္မွထြက္ခြာသူ၊ ထြက္သြားသူအားျပန္လာေစရန္ ယၾတာ/ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔺ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ၊ ေငြေခ်းေငြငွါးသြားသူမွျပန္လည္ေပးေစရန္ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔺အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္အဆင္မေျပသူမ်ား အတြက္ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္
🔺အမႈအခင္းကိစၥမ်ားေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမႈရန္ႏိုင္ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔺က်န္မားေရးမေကာင္းသူမ်ားအတြက္ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔺ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယၾတာ/ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔺အေနာက္အယွက္ အတိုက္အခိုက္ရိေနသူမ်ားအတြက္ယၾတာ/ဓာက္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္🔮ဆရာမင္းသုခ ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ📱09440243656 🏠73လမ္း/34-35လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕
တန်ခူးလတွင်မွေးဖွားသူများသည်ဤနှစ်တွင်ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အကြံအစည်းသစ်များ ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ကွန်ပျူတာနှင့်တီတွင်ပညာများဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ အသေးစားချေးငွေးလုပ်ငန်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ဘဏ်လုပ်ငန်းများကောင်းကျိုးပေးမည်။မိမိလက်အောက်ငယ်သားနှင့်တပည့်များအားအထောက်ပံ့ပေးရခြင်း၊လူမူရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။
စာချုပ်စာတမ်း၊ငွေကြေးကိစ္စများလက်မှတ်ေရေးထိုးခြင်းဂရုစိုက်ရမည်။ စီးပွားရေးတွင်ရှေ့ပိုင်းတွင်အဆင်ပြေသလိုရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အခက်ကြုံမည်။ယခုနှစ်တွင်ဝါဆိုလ၊သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်၊ပျိုရွယ်သူများစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းမင်္ဂလာနှင့်
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်မည်။ရည်စားရှိသူများကာလကြာသည့်အခါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲမှုများကြုံရကိန်းရှိသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ခြင်းကြောင့်အဆင်မပြေမှုများခဏခဏဖြစ်မည်၊ ဉာဏဆိုင်ရာပညာရပ်းများတီတွင်ဆန်းသစ်ပညာရပ်များသင်ယူသင့်သည်။သို့သော်ပညာရေးတွင် ခက်ခဲစွာသင်ယူရမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာညာဘက်ခြမ်းရောဂါဝင်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် သစ္စာပန်း၊ကံကော်ညွန့်(၉)ညွန့်လှူပေးပါ။ဖန်ခွက်ဖြင့်ရေတော်(၅)ခွက်လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ🌟ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် အရှေ့အရပ်မျက်နှာမူ၍ မေတ္တာသုတ်(၃)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အနီရောင်၊အဖြူရောင်၊အစိမ်းရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(ပ၊ဖ၊စ၊မ၊ည)၊(၃၊ဝ၊၇၊၂)
ကဆုန်လတွင်မွေးဖွားသူများသည် ဤနှစ်တွင်အခက်အခဲမည်မျှရှိစေဆောင်ရွက်စရာများရှေ့တိုး၍ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။အကြံစည်းသစ်များဆောင်ရွက်ရမည်။နယုန်လ၊ဝါခေါင်လများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သတိတရားရှေ့ရှု၍ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီးပွားရေးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုစိတ်များပေါ်ပေါက်နေတတ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းများကောင်းကျိုးပေးမည်။ မမျှော်လင့်ဘဲငွေကြေးများဝင်တတ်သည်။ညီအကို မောင်နှမနှင့် ဆွေမျိုးများ နှောက်ယှက်မှုကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အကျိုးအမြတ်များပျက်စီးတတ်သည်။ အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ပြုပြင်မှုများကြုံမည်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတိုခရီးရှည်များ သွားရကိန်းရှိသည်။ပျိုရွယ်သူများမေတ္တာရေးကံကောင်းပြီး မိမိရည်မှန်းထားသောချစ်သူများနှင့်မေတ္တာရေးများမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာများအနှောက်အယှက်များဝင်လာတတ်သည်။အပျော်အပါးလိုက်စားမှုကြောင့်လူမှုရေးပြဿနာများဖြေရှင်းရတတ်သည်။မိမိကြိုးစားသောပညာရေးတွင် ဝီရိယစိုက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ဆွေမျိုးသားချင်း ကူညီပံ့ပို့မှုများရရှိမည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင် စာမေးပွဲများဖြေဆိုခွင့် အခွင့်လှမ်းကောင်များရရှိမည်။ကျန်းမာရေးတွင် ဗိုက်နာခြင်းသွေးတိုးရောဂါ၊အဖျားအနာ၊ အပူရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖ရွှေပန်း၊ငွေပန်း၊လသာပန်းတို့ကိုမိမိမွေးနေ့တိုင်းဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ ဘုရားစင်တွင်ထီး၊တံခွန်၊ကုက္ကားနှင့်ယပ်တောင်လှူပေပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ🌟ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက်ဂုဏ်တော်(၉)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊ကြည်ပြာရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်၊ပန်းရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(လ၊ဝ၊သ၊ဒ)၊(၅၊၄၊၈၊၁)
ဤနှစ်တွင် ကာလအတန်ကြာကျန့်ကြာနေသောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြင့် အစစအရာရာကံကြမ္မာပွင့်လင်းလာမည်။အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကိန်းကြုံမည်။ ဆေးဝါးရောင်ဝယ်ခြင်း၊စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်လုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊အိမ်၊ခြံမြေအကျိုးဆောင်ခြင်းများကေင်း၏။မမျှော်လင့်ဘဲ ရာထူးတက်ခြင်း၊အကြွးအကဲဖစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်မှဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခြင်းခံရတတ်သည်။အဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများရန်မူခြင်းခံရတတ်သည်။ကျောက်မျက်ရတနာရွှေထည်၊ငွေလထည်ပစ္စည်းများဝင်လာတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများအတွက် မကြာခဏအမုန်းခံ၍ပြောဆိုပေးရတတ်သည်။စာချုပ်စာတမ်း၊ငွေကြေးကိစ္စအာမခံခြင်း၊လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အချစ်ရေးကိစ္စရပ်များ၌ အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။
ပျိုရွယ်သူများ ချသ်သူအပေါ်သံသယဝင်လာမည်။အိမ်ထောင်ရှင်များသားသမီးရတနာထွန်းကားပြီး ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်မည်။ပညာရေးတွင်ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိရည်မှန်းထားသောပန်းတိုင်ကိုဆွတ်ခူးရမည်။အပေါင်းအသင်းအနှောင့်အယှက်နှင့်အပျော်အပါးလိုက်စားမှုကိုရှောင်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ၊သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သောရောဂါများခံစားရ၍မကြာခဏကျန်းမာရေးညံ့မည်။ယခုနှစ်တွင်ရောဂါဖြစ်လျှင် မပေါ့ဆသင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အုန်းညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကြံညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီးကြေးပန်းအိုးဖြင့် ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ🌟ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ(၃)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊အပြာရောင်၊ကြက်သွေးရောင်၊အဖြူရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(စ၊ဆ၊တ၊ထ)၊(၆၊၄၊၂၊၇)
ဝါဆိုလမွေးဖွားသူများသည် ဤနှစ်တွင် အခက်ခဲမည်မျှရှိစေဆောင်ရွက်စရာများရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သင့်သည်။နိုင်းငံခြားမှဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေတတ်သည်။
အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊အဆောက်အဦးများဝင်လာမည်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအမြတ်ရခြင်းအမျိုးသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ဖုန်းအပိုပစ္စည်းများနှင့်စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်းများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်တွင်ဝါခေါင်လ၊သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ယာဉ်ရထားစီးခြင်း မောင်းနှင်းခြင်းများသတိထားရမည်။အမွေအနှစ်ရခြင်း၊ရာထူးတတ်ခြင်းအထက်အကြီးအကဲ၏ချီးမွမ်းခြင်းခံရမည်။မိဘအကြီးအကဲများ၏ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှေက်ပေးရတတ်သည်။ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုအားနည်းတတ်သည်။စွပ်စွဲမှုအမျိုးမျိုးခံစားရကိန်းကြုံမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သီခံခြင်းများဖြင့်သာယာသောအိမ်ထောင်မှုကိုဖန်တီးရမည့်နှသ်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးတွင်စနစ်တကျသင်ယူသင့်သည်။ ဉာဏ်၊ဝရီယစိုက်ထုပ်ပြီးလုပ်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် အစားအသောက်မှားယွင်းမှုကြောင့်ရောဂါဝေဒနာဝင်တတ်သည်။နှလုံးရောဂါခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင်ဆီးမီးသက်စေ့ကပ်ပူဇော်ပေးပါ။ဇွန်ပန်း၊သစ္စာပန်းနှင့်အဖြူရောင်ဂန္ဓမာပန်းများပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ🌟ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (ဘဂဝါ) ဂုဏ်တော်ဖြင့် (၉)ပတ်ပုတီးစိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ဖက်ဖူးရောင်၊အညိုရောင်၊အဝါရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(တ၊ထ၊က၊ခ)၊(၆၊၂၊၉၊ဝ)
ဤနှစ်တွင် ရှေ့ပိုင်း ၆လတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သတိတရားရှေ့ရှု၍ဆောင့ရွက်ရမည်။ စီပွားရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ အယူအဆအမှားများနှင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။သူတစ်ပါးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်းမိမိအကျိုးကိစ္စများပါအောင်မြင်မှုရမည်။ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာပစ္စည်းများ တီထွင်မှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရမည်။သတ္တုတွင်းနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းများကောင်းမည်။အမျိုးသမီးများအတွက်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ဂီတအနုပညာ၊အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဖနိစီလုပ်ငန်းများအကျိုးခံစားရမည်။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊သီတင်းကျွတ်လ၊တပိုတွဲလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ အမွေအနှစ်ကိစ္စအတွက်ဆွေမျိုးများနှင့်အငြင်းပွားပြီးဥပဒေနှင့်ယှဉ်ဆိုင်ရတတ်သည်။အချစ်ရေးကိစ္စရပ်များတွင်အဆင်ပြေမှုနှေးကွေးမည်။လူငယ်လူရွယ်များချစ်သူအပေါ်သံသယဝင်လာမည်။ နှစ်ထက်မိဘများသဘောထားကွဲလွဲတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စကားများရမည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ဂန္မမာပန်း၊မေမြို့ပန်း၊သစ္စပန်းတို့ကိုပေါင့းထည့်ပြီး အရှေ့အရပ်ရှိဘုရားတွင် ပူဇော်ပေးပါ။ ဇရပ်၊ကျောင်းများတွင်တံမြက်စည်း လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဗုဒ္ဓေါဘဂဝါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်သိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အဝါရောင်၊အနီရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော စတ်ကူးများကို လက်တွေ့အောင်မြင်မှုရသောနှစ်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းအလုပ်နေရာသစ်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါက အောင်မြင်မှုရမည်။နာမည် ဘုန်းကံတိုးတက်ပြီးနေရာအနှံ့သွားကိန်းရှိသည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်ဆက်ဆံရမည်။စိတ်လောကြီးပြီးတစ်ပါးသူ၏ ငွေကြေးများကိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်သုံးစွဲခြင်းများ ရှောင်သင့်သည်။ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဝင်မည်။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ။သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွငသတိထားရှိရမည်။
ဆောင်ရွက်ရမည်။ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုအားနည်းတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ ရံဖန်ရံခါစကားငြင်းဆိုမှုများပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပေါ်လာမည်။ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးတတ်သည်။ပညာသင်စရိတ်အတွက် ခက်ခဲလာတတ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၊ထုံနာကျင်နာရောဂါ၊လေနှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များနှင့်ပြသ၍ကုသလျှင်ရောဂါပျောက်ကင်းတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိ၏မွေးနေ့တွင် ငွေရောင်ပန်းအိုးဖြင့် ရွက်လှညွန့်၊စပယ်ညွန့်၊ပိထောက်ညွန့်၊သက်ကယ်ညွန့် တို့ကိုပေါင်းပြီးပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(မနုတ္တရောပုရိတ ဓမ္မာသရတိ)ဂုဏ်တော်ဖြင့် ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊လိမ္မော်ရောင်နှင့်နို့နှစ်ရောင် အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ပ၊ဗ၊တ၊ဓ).(၇.၆.၄.ဝ)
ဤနှစ်တွင်လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုးချ့ဲရန်ဆန္ဒရှိသောလည်းသတိတရားဖြင့်လုပ်ကိုင်သင့်သည်။အကောင်ူအဆိုးဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။လေကြောင်း၊ရေကြောင်းနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းများကောင်း၏။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သတိထားရှိရမည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်မှုမလွန်ကဲသင့်ပါ။ငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကျပျောက်တတ်သည်။ရည်းစားအပေါ်အချစ်ကြီး၍ မကြာခဏ ဒေါသထွက်တတ်သည်။အသက် ၂၂နှစ်မှ၂၆နှစ်ကြားရောက်ရှိနေသူများ အချစ်ရေးပြဿနာများဖြစ်တတ်သည်။မိမိထက်အသက်ဝါကြီးသောသူများနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမယုံကြည်စရာများဖြစ်မည်။သူတစ်ပါးအတွက်ကြောင့်မိမိဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတတ်သည်။ပညာရေးတွင်ရည်မှန်းထားသလောက်ရနိုင်မည်။နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်သွားရကိန်းကြုံမည်။ကျန်းမာရေးတွင်အကြောအဆစ်ရောဂါ၊လေးဖက်နာ၊ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါများ၊သွေးအားနည်းခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ခရီးတွင်ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုများနှင့်ကြုံရတတ်သည်။အမျိုးသမီးများမီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာများ ဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ဆီမီးသက်စေ့၊ပန်းသက်စေ့၊သစ်သီးသက်စေ့လှူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါ။သံဃာတော်များနှင့်အဖိုးအဘွား၊အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ငချိပ်ပေါင်း၊ ဘယကြော်၊ ထိုးမုန့်၊လမုန့်နှင့်အုန်းထမင်းလှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ဗန္နော)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊ ဆင်စွယ်ရောင်၊အနီရောင်၊အပြာရောင် အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ရ၊ယ၊လ၊ဝ).(၅.၉.၁.၃)
ဤနှစ်တွင် လုပ်ငန်းကိစ္စများရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်လုပ်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ကိုင်ပိုင်လုပ်ငန်းများမှ ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်ကိန်းများကြုံမည်။ကုမ္ပဏီထောင်ခြင်း၊ဘဏ်လုပ်ငန်းများခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအောင်မြင်မည်။မိမိသြဇာတန်ခိုးအာဏာများထက်မြက်ပေါ်လွင်မှုရှိလာမည်။ယခုနှစ်တွင်ဝါခေါင်လ၊သီတင်းကျွတ်လ၊တပ့ိုတွဲလများတွင်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။အိမ်ခြံမြေ၊အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရတတ်သည်။မိမိအားကိုယ်အားထား ခံအပ်ထားသောသူများကို ညီအစ်ကိုမောင်နှမဆွေမျိုးများဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းများနှောင့်နေးနေမည်။ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများ အလိမ်ခံရတတ်သည်။ပွဲလမ်းသဘင်လူနေထူထပ်သောနေရာများတွင်သွားလာခြင်းသတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။အချစ်ရေးတွင်မိမိစိတ်ဆန္ဒနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုဝေးကွားခြင်းများမကြာခဏကြုံမည်။မိမိထက်အသက်ကြီးသူတို့နှင့်ဆုံဆည်းရတတ်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များသားသမီးရတနာ ထွန်းကားပြီး စီးပွားရေး တိုးတက်လာမည်။ပညာရေးတွင်ဝီရိယရှိမှ မိမိမျှော်မှန်းထားသောပညာရပ်ကိုဆည်းပူးခြင်းရမည်။ပညာရေးဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ပညာရေးနှောင့်နှေးတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် ပုတီးစိပ်၊အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများအထူးပြုလုပ်၍ဆွမ်းနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်း၊ဆေးဝါးထုပ်များလှူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(အရဟံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၉)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ဖက်ဖူးရောင်၊ပန်းရောင်၊ကြည်ပြာရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊ခ၊ဂ၊စ).(၄.၉.၆.၈)
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ကြေးပန်းအိုးဖြင့်နှင်းဆီ၊သပြေ၊မာလာကာညွန့်တို့ကိုပေါင်းထည့်ပြီး ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ယပ်(၈)ချောင်း၊ရွှေထီး(၁၁)လက်လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သုဂတော လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပေးပါ၊၊
ဤနှစ်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဦးစားပေးရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။အောင်မှုများရရှိမည်။မိမိသြဇာတန်းခိုးအာဏာများထက်မြက်ပေါ်လွက်မှုရှိလာပေမည်။အိမ်ခြံမြေရောင့းဝယ်ခြင်း၊တိုက်ခန်းများရောင်ဝယ်ခြင်း၊ငှားရန်းခြင်း၊ဖန်စီနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းမည်။အတိုက်အခိုက်အမျိုးမျိုးကြားမှအောင်မြင်မူကိုရရှိနိုင်မည်။တပည့်လက်အောက်ငယ်သားနှင့်အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မှုတွင်သတိထားပြီးပြုလုပ်သင့်သည်။ယခုနှစ်တွင်နယုန်လ၊သီတင်းကျွတ်လတပို့တွဲလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားကိန်းများကြုံမည်။ငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေမည်။အသက်(၁၅)နှစ်မှ(၁၇)နှစ်ကြား၊အသက်(၂၀)နှစ်မှ(၂၃)နှစ်ကြားရှောက်ရှိနေသူများအချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အဖုအထစ်များတွေ့ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များတစ်ပါးသူအတွက်မိမိဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတတ်သည်။အနှပညာနှင့်ဖန်တီးမှုများကိုထိရောက်စွာဝေဖန်ခံရမည်။ပညာရေးတွင်ရှေ့ပိုင်းကြိုးစားမှုအားကောင်း၍ထူးချွန်ပြီး ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယိုက်ထုပ်ရမည်။ကျန်းမာရေးအညံ့များဝင်လာခြင်းဦးခေါင်းနှင့်အရိုးအဆစ်ရောဂါများ၊လေရောဂါ၊အဆုတ်အအေးမိခြင်းရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ကြေးဖလားဖြင့်ရေတော်(၅)ခွက်နှင့်ယို(၅)မျိုးလှူပေးပါ။တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင်သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊နှင်းဆီပန်း၊အုန်းညွန့်၊ကံကော်ညွန့်တိုကိုပေါင်ပြီး ပန်းအိုးတစ်အိုးဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးရမည်။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သမ္မာသမ္ဗဒ္ဓေါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊ အဝါရောင်၊ကြက်သွေးရောင်အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊စ၊ည၊င).(၁.၉.၂.၄)။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်၊မေမြို့ပန်း၊ ပိတောက်ညွန့်၊ ဇီးညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကန်းဇွန်းညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီး ကြွေပန်းအိုးဖြင့် အရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ပန်းများ၊မုန့်ထုပ်၊ကော်ဖီမစ်ထုပ်၊ခေါက်ဆွဲထုပ်များလှူဒန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အနီရောင်၊အပြာရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်၊ အဖြူရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ယ၊ရ၊တ၊ဓ).(၂.၅.၉.၃.)။
ဤနှစ်တွင်ပြည်တွင်းပြည်ပကိစ္စရေးရာအဖြာဖြာဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အခါကောင်းကျရောက်သောနှစ်ဖြစ်သည်။စိတ်ကူးသစ်နှင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အထူးခြားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ထွန်းလာမည်။ဖန်စီလုပ်ငန်း၊ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။အထူးသဖြင့်တစ်ပါးသူ၏ကြားခံဝင်ရောက်ပြောဆိုမှုများနှင့်မိသားစုတွင်ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ယာ၊တိုက်ခန်း၊မြေယာခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။လူမျိူးခွဲများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်သောအလုပ်များကောင်းမည်။ မေတ္တာရေးတွင်အသေးစားပြဿနာများကို အကျယ်ချဲ့၍ပဋိပက္ခဖြစ်ကာ လမ်းခွဲရခြင်းကြုံရမည်။အိမ်ထောင်ရေးစိတ်သဘောထားကြီးကြီးထားသင့်သည်။မိမိအိမ်တွင်းရေးများနှင့်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားခြင်းများအတွက်ငွေကြေးနှင့်လူမှုရေး အပူသောကများဝင်လာတတ်သည်။နယ်ဝေးဆွေမျိုးများအိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊မသွားလိုသောခရီးများလဲသွားရတတ်သည်။
စက်မှု၊လက်မှုပညာခေတ်နှင့် ညီသောပညာရပ်များ လေ့လာလိုက်စားခြင်းများအထူးကောင်းမွန်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်၊အဖျားအနာ၊နှလုံး၊ဆီး၊ကျောက်ကပ်၊အင်္ဂါဇတ်အစရှိသောရောဂါဝေဒနာများခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း၊အောင်သပြေ၊ကံကော်ပန်းနှင့်သစ္စာပန်းများကိုအရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်လှူဒန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ🌟ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သတ္တဒေဝမနုဿာနံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ကြေးနီရောင်၊အဝါရောင်၊အစိမ်းနုရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (သ၊ဟ၊စ၊ည).(၁.၆.၈.၃.)။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းကိုယ်ကျန်းမာပြီး နှစ်မှာအောင်ကံကောက်းမှုများနှင့် အောင်မြင်သောနေ့ရက်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ 🌷🌷🌷
🌟 အောက်ပါ ထိမိသော ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် /ယတြာ အစီးအမံများ အာမခံဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်🌟အိမ်ခြံမြေ၊ကား၊ အစရှိသောပစ္စည်းများ မိမိကြိုက်ဈေးဖြင့် အမြန်အရောင်းထွက်ရန် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်အိမ်မှထွက်ခွာသူ၊ ထွက်သွားသူအားပြန်လာစေရန် ယတြာ/ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔺ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ၊ ငွေချေးငွေငှါးသွားသူမှပြန်လည်ပေးစေရန် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔺အချစ်ရေးအဆင်မပြေသူများ၊ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်အဆင်မပြေသူများ အတွက် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်
🔺အမှုအခင်းကိစ္စများအောင်နိုင်ရေးအတွက် အမှုရန်နိုင် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔺ကျန်မားရေးမကောင်းသူများအတွက် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔺ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔺အနောက်အယှက် အတိုက်အခိုက်ရိနေသူများအတွက်ယတြာ/ဓာက်ရိုက်ဓာတ်ဆင်🔮ဆရာမင်းသုခ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ📱09440243656 🏠73လမ်း/34-35လမ်းကြား မန္တလေးမြို့